Soo saaraha qaboojiyaha ganacsiga | Newell-China
abuur qiimo weyn in ka badan alaabta
Nenwell waxay haysataa badeecooyin ganacsi oo heersare ah oo waxqabad sare leh iyo tamar-badbaadin balaadhan si ay ula kulmaan codsiyadaada gaarka ah.
In ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah oo qaboojinta la xareeyay. Nenwell waxay siisaa dhammaan macaamiisha xalal hufan oo sax ah oo ku saabsan qaboojiyaha iyo garoonka huteelka. Waxaan mar walba oofinnaa ballanqaadkeenna ah "In la abuuro qiimo ka badan rabitaanka macaamiisha".
Si looga hormaro Suuqa
oo kala duwan
Sida soo saaraha qaboojiyaha ganacsiga ee xirfadleyda ah, Nenwell wuxuu leeyahay aragti ballaadhan iyo dareen xasaasi ah oo ku jira warshadaha, waxaanu leenahay awood cusub oo cusub oo ku saabsan cilmi-baarista iyo horumarinta si aan u siino xalalka qaboojinta heer sare ah macaamiishayada.
Aragtida Caalamiga ah, Taabo Waxyiga
Ka qaybgalka noocyada kala duwan ee qalabka hoteelada caalamiga ah iyo bandhigyada qaboojiyaha sannad kasta. Tani waxay naga dhigaysaa inaan noqono kuwo xirfad badan oo xasaasi u ah isbeddellada suuqa.
wax soo iibsiga caalamiga ah,
iibka kulul ee caalamiga ah!
Awoodaha wax iibsiga caalamiga ah waxay u ogolaataa Nenwell inuu ku taliyo oo uu tusiyo badeecadaha wax iibinta kulul ee caalamiga ah macaamiisheena wakhtiga, siina macluumaadka gacanta koowaad ee ugu badan talaajad ganacsi. Ka caawinta macaamiisha inay qaataan fursadaha ganacsi ee ugu horreeya.
iskaashiga ka marag furo fursadaha aan dhammaadka lahayn !
matoorka taageere tiirka hadhsan
qaboojiyaha tuubada siliga
heerkulbeeg elektaroonik ah
Wax soo iibsiga suuqa oo tayo sare leh iyo awoodaha goobidda ----500 Alaab-qeybiyeyaal iska kaashaday oo wata in ka badan 10,000 oo badeecooyin iyo qalab qaboojiyeyaal ah. Oo ay ku jiraan qalabka guriga, qaybo iyo alaabta ceeriin.
Xalka qaboojiyaha oo dhamaystiran
hotelka & supermarket-ka!
Sannado badan oo ku-dhaqanka xirfadeed iyo waayo-aragnimada, tiro badan oo ah fursadaha qaboojinta ganacsiga iyo falanqaynta saxda ah ee warshadaha ayaa siinaya Nenwell xulashada degdegga ah si ay ugu taliso alaabta qaboojinta tamarta-badbaadinta cagaaran ee ugu habboon. Si kor loogu qaado ku habboonaanta alaabta, badbaadi shaqada iyo meel bannaan! Naqshad sawirada sawirada macaamiisha si ay u bixiyaan xalka ugu fiican.
U samee mustaqbal ifaya leh
10 jeer iibka saddex sano gudahood
Sannadihii la soo dhaafay, Nenwell waxay si joogto ah u siisay talooyinka horumarinta suuqa ee macaamiisha kala duwan, macaamiisha ku beeray khibradda alaabada qaboojiyaha, ka caawinta macaamiisha inay si dhakhso ah u qabsadaan saamiga suuqa! Qaar ka mid ah macaamiisheena ayaa ku guuleystey kobaca iibka degdega ah muddada gaaban iyada oo la kaashanayo Nenwell!
Anaga oo ah OEM & ODM soo-saare qaboojiyaha, waanu ku hanweynahay tan oo aan sidoo kale u qaadano tan si aan dib ugu soo celino daryeelka bulshada Nenwell. Guusha ganacsigeena waxay si adag u aasaasan tahay daacadnimada, la isku halayn karo, is aaminaada iyo ixtiraamka ka dhexeeya dhammaan xubnaha shirkadda, macaamiisheena iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga. Iyadoo la aqoonsanayo muhiimada iskaashiga, waxaan la dhisnaa bonds adag macaamiisheena iyo alaab-qeybiyeyaasha, annagoo diiradda saarayna korriinka iyo guusha wadajirka ah.